I-Monkey Man Rooster Umfazi ukuhambelana kwexesha elide - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana I-Monkey Man Rooster Umfazi ukuhambelana kwexesha elide
Ngokwe-zodiac yaseTshayina, kubudlelwane phakathi kwendoda yeNkawu kunye neQabane lomfazi, uyayixabisa kakhulu indlela akrelekrele ngayo kwaye ahlekise ngayo. Kunzima ukuchaza umtsalane anawo kuye. Umfazi oQhaqha ufuna ukuhlanjululwa kwiqabane lakhe kunye nothando.
Iikhrayitheriya IMonkey Monkey Rooster isiDanga sokuNgqinelana kwabafazi
Kunokuthiwa unxibelelwano phakathi kwendoda yeNkawu kunye nenkuku yomfazi kulukhuni kuba baya kukhuphisana omnye nomnye ngenxa yokunconywa nokudunyiswa kwabanye.
taurus inyanga yenyanga ngothando
Indoda yenkawu ayinakuyimela into yokuba umfazi uMqhagi uyakuthanda ukulwa, kanti yena usenokucinga ukuba ulibele kakhulu kwaye unenkani ukwamkela ingcebiso yakhe. Uyakuthanda ukwenza umsebenzi wakhe ethe cwaka kwaye ngesiqhelo akenzi ngxabano xa ejongene nento ethile.
Ngaphezulu koku, unobuchule kwaye wahlukile. Unomdla kwaye unomdla wokubona kuphela iimpazamo zakhe. Kubalulekile ukuba bayeke i-egos yabo ukuba bafuna ukuba nobudlelwane obulinganayo kunye noxolo kunye.
Umtshato wabo unokuhlala womelele ixesha elide ukuba bathatha isigqibo sokulwela iinjongo ezifanayo. Xa oku kusenzeka, baqala ukuqonda ukuba kuthetha ukuthini ukusebenza kunye.
Nangona kunjalo, oku akuthethi ukuba abayi kuba neengxabano, njengoko bobabini bachaza kakhulu kwaye banokugculela. Umfazi weQabane uyaphikisana, ngelixa indoda yenkawu icaphukisa.
Ukuba bafuna ulwalamano lwabo luhlale ixesha elide kakhulu, kufuneka bachithe ixesha labo kunye bekuzonwabisa kangangoko banako, nokuba uluhlobo olugciniweyo olungathandi ukwenza abahlobo abatsha kunye nokudibana nabantu.
Indoda yenkawu ikhutshiwe kwaye iyathanda ukuba neengxoxo zengqondo. Uyakonwabela ukuphuma nokuhlangana nabahlobo kuba le yeyona ndlela ifanelekileyo yokubonisa ubuntu bakhe nokusebenzisa amandla akhe.
Ngaphandle kwalo mahluko wabo, umfazi weQabane angaphela edidekile kwakamsinya akufumanisa ukuba iqabane lakhe likhetha ukucinga ngakumbi kunokusebenzisa izimvo zakhe.
Uloluhlobo olusebenzayo kunye nolwazelelo, ngenxa yoko akaqondi ukuba kutheni engenzi nto ukwenza ukuba izicwangciso zakhe zisebenze.
Akonwabanga kwaye kunokubonakala ngathi akakwazi ukuzibophelela, enokuthi ibenomfazi oQhelekileyo onoxanduva angamfuni njengeqabane. Indoda ye-Monkey inokucinga ukuba umfazi wayo we-Rooster akadingi kuthuthuzeleka ecaleni kwakhe, njengoko efuna kwaye ehlala enemveliso.
Ngaphandle koko, ugqibelele onemigangatho ephezulu kakhulu, akunamsebenzi nokuba uyathandana okanye ungumhlobo nje nomntu. Xa indoda yenkawu inokuthi ifikelele kwimigangatho yayo, iya isiba nokugxeka kwaye igxeke.
i-virgo libra cusp umntu othandweni
Kwelinye icala, unokuba nobugorha kakhulu kwaye akanakuze afune ukuthatha ingcebiso yakhe ayithathele ingqalelo. Ukuba umfazi weQabane kunye nendoda yeMonkey bafuna izinto phakathi kwabo zisebenze, kufuneka babone iimpawu ezintle zomnye nomnye.
Ngokukhawuleza ukuba indoda yenkawu ifunde ukuba noxanduva ngakumbi, umfazi weQabane uyakhanyisa kwaye banokusebenza kakuhle njengesibini.
Imfene kunye neRock Rooster ukuhambelana: Ubudlelwane obunzima
Iminyaka yamaTshayina yeNkawu: 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 no-2016
Inkawu Zodiac yaseTshayina: Iimpawu eziPhambili zoBuntu, uthando kunye nethemba lomsebenzi
I-Rooster yaseTshayina Zodiac: Iimpawu eziphambili, uthando kunye nethemba lomsebenzi
Epreli 5 Imihla yokuzalwa
Uyifumana njani indoda ebuyayo yeCapricorn: Into ekungekho mntu ukuxelelayo
Leo indoda aquarius umfazi ukuhambelana
uphawu lwe zodiac lwe-okt 31
Uphawu lweZodiac ngoJulayi 4
i-taurus eyindoda kunye ne-libra yabasetyhini
loluphi uphawu ngoJanuwari 30